AMA-SWIMSUITS AMA-22 ABALASELEYO KWIBUSTS ENKULU NGO-2021-IINDAWO ZOKUSEBENZA EZIXHASAYO - UHLOBO
Ama-swimsuits ama-22 aBalaseleyo kwiibhasi ezinkulu ezibonelela ngenkxaso eyaneleyo kunye nentuthuzelo
Eyona / Uhlobo
Xa une-bust enkulu, i-swimsuit shopping inokuphazamisa kwaye iphele ngokungapheliyo. Uninzi lweesuti zokuhlamba kubathengisi abaqhelekileyo zenzelwe abasetyhini abaneekomityi ezincinci kwaye ngokulula abaxhasi amabele amakhulu, ke kulula ukudimazeka kukusilela kokukhetha.
Ngethamsanqa, uninzi lweempawu ezikwi-Intanethi zonyusile umdlalo wazo ukuba zinike abafazi abancancisayo abanesitayile sokuqubha esiza neempawu zokubonelela ngenkxaso eyaneleyo. Okona kunikwa inkxaso yimpahla yokuqubha, kokukhona kufanelekile (iya kuba kokukhona) kwaye kokukhona uya kukhululeka kwaye ujongeke, utshilo uSara Mitzner, usekela mongameli wezobugcisa kunye nophawu ku Ukudada kubo bonke , umthengisi weempahla zokudada ubungakanani.
Ezinye izinto eziphambili ekufuneka uzigcine engqondweni: Nasiphi na isitayile nge underwire uza kuphakamisa kwaye axhase umlo omkhulu, utshilo uMitzner. Imitya yenye into ebalulekileyo kwezokudada kwiibhasi ezinkulu-jonga ezibanzi nezilungelelanisiweyo ukuze ufumane ilifti efanelekileyo, ukhuseleko, kunye nokukwazi ukwenza ulungelelwano lwakho. Ndiyayithanda i-halter yesifuba esikhulu, utsho, esongeza ukuba i-swimsuit tops ngayo Ukuvalwa okulungisekayo iya kunceda ukugcina amantombazana akho etshixiwe endaweni.
Okona kubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, uMitzner ufuna ukuba abantu basetyhini bayazi loo nto hayi isitayile asiyiyo imida, nokuba ubungakanani be-bra yakho, okoko nje isuti yokuqubha inikezela ngenkxaso efanelekileyo kwaye ikwenza uzive uqinisekile kulusu lwakho. Ukulungele ukubetha ulwandle? Ezi swimsuits ezintle zebhasi ezinkulu ziya kugcina amabele akho aphakanyisiwe kwaye kuthintele ukuba angachitheki ngaphezulu, nokuba ungafika phi na kwiimozulu zakho ezifudumeleyo zemozulu.
Ukukhanya kwelanga etyheli yento enye yokuqubha kukhwaza nje ehlotyeni. Ukongeza kumbala omhle, oku kulungela ukuxhasa igxininisa iirve zakho nge-ruched, midline , ngelixa i-halter top eguqulwayo igcina indawo enkulu ikhuselekile endaweni yayo. Hayi kumbala? Akukho zinkxalabo, iza ngee-shades ezahlukeneyo kunye neprints ukuze ufumane enye ehambelana nesimbo sakho.
Intsingiselo yokomoya eyi-1111
2 I-Piece enye ye-Swimsuit ene-High-Neck IAmazon Ndilinge$ 26.99 THENGA NGOKU
Le swimsuit exhasayo unamawaka eenkwenkwezi ezi-5 zokuphononongwa kwiAmazon kwaye iyafumaneka ngemibala emininzi kunye nobukhulu obudibeneyo. Abavavanyi bathi ipisi enye ibenza bazive be-sexy kwaye babonisa kancinci ukucoca ngaphandle kokunikela ngenkxaso. Ibhrashi yokutyhala, ibhanti esinqeni, kunye nokuvalwa kwekhonkco entanyeni kugcina amabele ephakanyiswe ngokugqibeleleyo kwaye kuthintela ukuchitheka. Kwaye, izinto ezoluliweyo, ezirhabaxa zombini ziyacotha kwaye zikhululekile.
3 Ukusika i-Underwire Mesh One-Piece IAmazon Dibana neCurve amazon.com$ 35.99 THENGA NGOKU
Zininzi izinto ezintle esinokuzichaza malunga nale suti. Ukuvalwa kwe-S-hook ngasemva kunye nemitya ehlengahlengisiweyo iya kuqinisekisa ukuba iyakulingana njengeglavu, i-underwire inika amantombazana ukuphakamisa kunye nenkxaso, kunye neephaneli zemesh ngaphambili nangasemva ziyahlulahlula kuyo yonke into emnyama emnyama kwintengiso.
4 I-Diva White Dot Halter ePhakamileyo-esinqeni yokuqubha Izitya zokudada Zonke Izitya zokudada ZonkeIidola ezingama-52.50 THENGA NGOKU
Le swimsuit yokuthopha ifumaneka ngobungakanani 4 ukuya 24, kwaye ikwanjalo ifumaneka ngombala omnyama . Ukuvalwa kwesitshixo esiphindwe kabini kunika inkxaso ebaluleke kakhulu, ngelixa amagwegwe amile njengo-S qinisekisa ukuphumelela okuphezulu ' eze wenziwe. Ngaphezulu, iibhotile eziphakanyisiweyo eziphakamileyo zongeza kule ndawo intle, ukubukeka kwe-retro ngelixa unciphisa indawo yesisu.
5 Intambo yeCrochet V Intamo yeBhikini IAmazon izithembiso amazon.com$ 26.99 THENGA NGOKU
Asazi ukuba yintoni engcono-iinkcukacha ezizodwa ze-crochet kwesi siqwenga okanye inkxaso eyoyikekayo esiyinikayo. Yenziwe ukuba ilingane i-C ukuya kwi-G ngobukhulu beekomityi, umphezulu une-S-hook yokuvalwa kabini ngasemva kunye nokwakhelwa ngaphakathi kokuthambisa okuthambileyo. Kuza kwakhona i-coral, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-beige.
6 IVintage yePolka ePhakamileyo-esinqeni Swimsuit AMOURRI amazon.com $ 59.99$ 29.99 (50% icinyiwe) THENGA NGOKU
Iibhothi zokudada eziphakanyisiweyo eziphakamileyo, ezomdiliya eziphefumlelweyo aziphumi ngohlobo nangaliphi na ixesha kungekudala, ezilungele nabani na okhetha ukogquma okungaphezulu kwesisu kunye nangasemva. Umphezulu uquka I-underwire bra kunye ne-boning eguqukayo yokuphakamisa amabele , kwaye isitshixo sokubuyela umva sinika inkxaso ngakumbi. Ikwafumaneka ngobukhulu obuncinci ukuya kwi-5X-enkulu kunye nezinye i-11 yoyilo ukuba uyathanda ukulunga kodwa hayi imibala.
7 I-Crisscross enye-yePiece Swimsuit W Wena Di An amazon.com$ 21.99 THENGA NGOKU
Le swimsuit exhasayo ifaka uyilo lomnqamlezo ophambili kunye nemitya engaphambili , Ebanzi kwaye inikezela ngenkxaso ebalaseleyo yokugcwala. Inxalenye enye inoyilo olunciphayo, kwaye imitya inokubotshelelwa nangayiphi na indlela oyithandayo. Ukuba uyakuthanda okufanelekileyo, unoku-odola le swimsuit ngemibala eyahlukeneyo eyi-12, kubandakanya neblue, bomvu, kunye nokunye.
kutheni ingama-666 embi
8 I-Peach Floral Tie-Front Underwire Idada ephezulu Torrid mzantsi.com$ 32.99 THENGA NGOKU
Ewe ungashenxisa ngokupheleleyo ukuprinta ngesibindi nangona unesifuba esikhulu. I-Torrid ibonisa ukuba le ntyatyambo emnandi ye-underwire bikini. Ngaphezulu, ngokukodwa yenzelwe ubukhulu obukhulu , ngu ifumaneka ngobungakanani beekomityi C ukuya ku-F .
9 Umphindezeli Halter Bikini Phezulu bonke abantu Ukudada kubo bonke swimsuitsforall.com$ 24.00 THENGA NGOKU
Ukuba ukhangele ukuphakanyiswa okukhulu, oku kubophelelwe kabini i-halter bikini phezulu kunye nebhanti elingaphantsi elinomqolo unemqolo-ngokoqobo.
10Ixabiso elifanelekileyoI-Bust epheleleyo ye-Bust ephezulu kwiPalm Print I-Asos UYILO us.asos.com$ 7.80 THENGA NGOKU
Ingqokelela ye-Buster ye-Bust ekhoyo kwi-ASOS isinika ithemba lokulinganisa okubandakanya. Uhlobo luye ubungakanani beekomityi ezisusela kuma-32D ukuya kuma-34I, ukungqina ukuba kukho ispunky, isuti yokuqubha enomdla ngaphandle phaya kubafazi abanezifuba ezinkulu ngexabiso elifikelelekayo. I-bikini top yokwahlulahlula kwaye inika amantombazana into entle yokuphakamisa.
Shumi elinanye I-Plus-Piece I-Piece enye ye-Swimsuit UDacian amazon.com$ 35.99 THENGA NGOKU
Ukuba uyazazi malunga nendawo ophakathi kuyo, cinga ukuthabatha oku kufikelelekayo, unciphise isuti enye yokuqubha. Ukurhuqa isuti kugxininisa elona candelo lincinci kumgca wakho ophakathi. Inemitya eshinyeneyo, ehlengahlengiswayo yenkxaso eyongezelelweyo kunye nokuphakamisa ukuze ukwazi ukusebenza elunxwemeni okanye uvule amanzi ngokuzithemba. Kwaye kukho iitoni zemibala emnandi onokukhetha kuzo!
12 I-Athletic Ribbed Bikini IAmazon Woherby amazon.com$ 21.99 THENGA NGOKU
Ngamanye amaxesha, a I-bikini ephezulu efihliweyo njengebhola yezemidlalo kuko konke okudingayo (ngakumbi xa yonke into oyifunayo kukujongeka okulula kunye nokulunga!). Le swimsuit yezemidlalo ibonelela ngenkxaso kunye nokugubungela ibra yezemidlalo kodwa kuyilo oluhle olunemibhobho. Intamo yesikolo ikusindisa kuyo nayiphi na imigca ye-tan engaqhelekanga kwaye imitya eshinyeneyo inika inkxaso entle.
13 Indebe yeBra yokuSonga iHalter yeBikini ephezulu imbaleki imbaleki.gap.com$ 34.99 THENGA NGOKU
Olu phezulu lunazo zonke iibhasi ezinkulu : I-halter ephezulu yokuxhasa, uyilo olusongelayo lokusonga, ukolula, ilaphu lokomisa ngokukhawuleza, kwaye I-eco-friendly njengoko yenziwe ngenayiloni erisayikilishwe. Ukuba uthanda ukudada, ukutshiza, okanye ukuchitha ixesha emanzini, awuzukuba naxhala malunga namantombazana nale. Owu, kwaye khange sitsho ukuba ubungakanani bonyuka buye kwi-40 D / DD?
14 I-V-Neck enye ye-Swimsuit yabasetyhini CUPSHE amazon.com$ 28.99 THENGA NGOKU
Ifumaneka ngobukhulu XS ukuya kwi-XXL , esi siqwenga sithandekayo sithatha uluhlu lobungakanani. I-swimsuit ethengiswa kakhulu ine-V-intamo ejijekileyo yokucheba okongeziweyo kunye nentamo ye-V yokufaka into ebonisa isini. Abaphononongi bayangcungcutheka malunga nokulunga kwayo kunye nokuxhasa okuphezulu, nabo.
akhangeleka njani amakhalane ezinjeni
Shumi elinantlanu IsiQwengana esinye seRetro IAmazon Ukunambitha okuhle amazon.com$ 21.99 THENGA NGOKU
Njani le retro? Inkqubo ye- Iinkcukacha zamagxa idibene nomtya ongqindilili iya kutsala umdla kude nesifuba sakho, ukuba ngaba ujongile. Kwaye, uya kufumana iinkcukacha ezibandayo zamagxa wonke umntu azithandayo ngaphandle kokuncama inkxaso enkosi kwimivumbo eyongezelelweyo.
16 I-Multi Medallion Printa i-Wireless Bikini ephezulu Torrid Torrid mzantsi.com$ 29.75 THENGA NGOKU
Thina thanda Olu shicilelo lungathath'icala. Yenzelwe ukuba ilingane umzimba odityanisiweyo, ngakumbi abo baneebhasi ezinkulu. Izinto zokugubungela ezipheleleyo kunye ne-mesh-lined, iikomityi ezingenazingcingo zinceda ukukhusela amantombazana akho kwindawo efanelekileyo, kuthintelwe ukutyibilika okungafunekiyo kuzo zonke iindleko. Ikwafaka ne-40 + ye-UPF yokhuselo lwelanga ke unokuhlala elangeni kunye nokhuselo olongezelelweyo.
17 Ukuqubha kweTankini Swimsuit IAmazon Aixy amazon.com$ 27.99 THENGA NGOKU
Ngobungakanani obuhamba buncinci buye kwi-XX-enkulu kunye ne-13 eprintiweyo eyahlukeneyo, le ngqokelela ye-combo efanelekileyo ye-bikini idibana ne-tankini. Umphambili odibeneyo kunye nomgangatho ophakamileyo ophakamileyo ngokwemvelo usifihla isisu sakho Ngelixa usancomayo umzobo wakho. Kwaye ine- i-bra edibeneyo kunye nemitya emine ehlengahlengayo ngasemva ukukunika inkxaso yenkxaso. Yiya elunxwemeni uye kwisidlo sangokuhlwa ngokudibanisa ibandeau ephezulu kunye neebhulukhwe ezimfutshane, ibhulukhwe evulekileyo, okanye isiketi.
18 I-Bikini ephezulu yeRuffled IAmazon CUPSHE amazon.com$ 29.99 THENGA NGOKU
Ayisiyiyo kuphela i-ruffles yokongeza ukubamba kwabafazi, kodwa le nto iphambili ngokwayo ixhasa kakhulu iibhasi ezinkulu ngenxa yemigca yayo enokuhlengahlengiswa kunye nezinto ezingama-20% zeSpandex, ezenza ukuba ithambile kwaye yolule ukuphefumla ngaphandle kolungelelwaniso lolwakhiwo.
ingaba injani into elunywa yincukuthu
19 Ishicilelwe kwi-One-Piece Swimsuit IAmazon Iindlela zaseMelika$ 26.99 THENGA NGOKU
Ukuba uyazibuza, Njani emhlabeni balindele ukuba ii-boobs zam zihlale zibekiwe lonto ? sukukhathazeka. Le swimsuit ixhasayo iza nemitya enokuthi isikwe okanye isuswe, kuxhomekeke kwinto okhululeke kuyo. Inxalenye enye ine-bra eyakhelweyo ngaphakathi kunye nenkxaso ye-underwire yokunyusa okungaphezulu.
Amashumi amabini Igxalaba elinye lokubhukuda IAmazon Runtlly amazon.com$ 26.99 THENGA NGOKU
Siyazithanda ii-insets ezisemgangathweni ezomeleleyo zokuqubha kwesiqwenga esinye. T uyilo lwegxalaba elinye lubonisa ukugqwesa okungafaniyo-ngokoqobo . Iikomityi zayo ezithambileyo zenza ukuba le ibe yinto ephezulu kakhulu kubafazi abaneebhasi ezinkulu, kwaye nabo baneekomityi ezincinci, nabo. Iza ngobukhulu ukuya kuthi ga kwi-4XL.
amashumi amabini ananye I-Fringe Bandeau I-Piece enye ye-Swimsuit Ukudada kubo bonke Ukudada kubo bonke swimsuitsforall.com$ 75.00 THENGA NGOKU
Siyayithanda inkcukacha yemiphetho elungileyo, kwaye le swimsuit inciphayo inomdla njengoko ixhasa. Iikomityi ezibunjiweyo kunye ne-bra eyakhelweyo yenza ukuba oku kube yinto ekhethekileyo kwabo baneekomityi ezinkulu. Kwaye ngelixa inokunxitywa njengesinxibo esingenamtya, sicebisa ukuba sithathe Uncedo lomtya osuswayo we halter kuba amabele akho anokufuna oko kongezwa oomph . Nokuba yeyiphi na indlela, le swimsuit ine-silicone elastic ngaphezulu, ukuze ungakhanyisi nabani na (ngengozi, nokuba kunjalo)!
22 V-Intamo Ruffle Monokini IAmazon Ifana nqwa amazon.com$ 32.99 THENGA NGOKU
Siyayithanda le nto yokuqubha yeentyatyambo ezitshisayo kunye neeriflethi. Ngelixa uninzi lwenzelwe abafazi abakhulu abanesithukuthezi kunokuba sisiseko, le yona yenza intuthuzelo kwaye Yila into ephambili . Inemitya eshinyeneyo ehlengahlengayo ngasemva, iphedi esuswayo, kunye nomtya wangaphambili wenkxaso eyongezelelweyo. Ukuba ufuna ukubonisa ubambo kodwa uzive ukhuselekile, nantsi into oyikhethileyo.
ungalahlekelwa njani kukuzilolonga kwamafutha esiswini
I-1010 inombolo yengelosi enentsingiselo
Ukutya okufanelekileyo kunokunciphisa ukulahleka kwesisindo
ingaba injani inyosi